Ungamaka njani umntu kwiBali le-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Oktobha 25, 2020 0 IiCententarios 517
Akuthandabuzeki ukuba i-Instagram yeyona ndawo inethiwekhi yokunxiba ngokubonakalayo, ukongeza, kukho imisebenzi eyahlukeneyo enayo kwaye evelisa amathandabuzo kubasebenzisi, umzekelo, Indlela yokumakisha umntu kwibali le-Instagram, umxholo esiya kugxininisa kuwo.
Indlela yokumakisha umntu kwibali le-Instagram
Las Amabali e-Instagram o Instagram Stories, ikakhulu ziividiyo ezimfutshane ezithi shwaka emva kwexesha elithile, ngakumbi, emva kweeyure ezingama-24 kupapasho lwabo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba kunokwenzeka ukuba ubandakanye kula mabali, izitikha, umculo, imizobo, phakathi kwabanye; ukuba kamva wabelane nabo bonke abalandeli bakho.
Ngokuya ngabaphuhlisi be-Instagram, injongo amabali Ilele kwisakhono sokuba lo msebenzi ukukunika ukuba wabelane ngexesha, imisebenzi kunye nentengiso yasimahla kunye nabanye abasebenzisi, kwisithuba esingesiso sesondlo.
Ibali ngalinye liya kuvela ngokulandelelana kokupapashwa, lenze uhlobo lomsonto okanye ulandelelwano lwemovie. Enye inzuzo enkulu kukuba ukupapashwa akuphelelanga, ngokuchaseneyo, unokushicilela amabali amaninzi njengoko ufuna.
Kwelinye icala, enkosi kwinto yokuba uya kuba nakho ukufikelela kwinani lokujonga ibali lakho okanye igama leprofayile labasebenzisi abalibonileyo, eli nqaku linokuba luncedo kakhulu ukwazi uhlobo loluntu olunomdla kumxholo wakho.
Maka umntu kwibali le-instagram: Inyathelo ngenyathelo
Ukufezekisa ithegi kumntu kwibali lakho le-Instagram, landela nje amanyathelo esiya kuthi siwanike iinkcukacha ngokukhawuleza kwaye sonwabe ngokupheleleyo kwiinkonzo ze-Instagram:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuvula i-Instagram application ngqo kwiselfowuni yakho, kuba eyona nto ikhuselekileyo kukuba ukuba ungumsebenzisi othembekileyo wale nethiwekhi, uya kuyikhuphela kwaye uyifake kwisixhobo sakho.
Hlala ngaphakathi kwecandelo elivela kwi-icon yendlu, apho uhlala ujonga khona izithuba zabasebenzisi obalandelayo.
Kwinxalenye ephezulu yasekhohlo kwesikrini sakho, uya kuqaphela ukuba umfanekiso wakho weprofayile uyavela kwaye kubungakanani obuncinci uphawu lokudibanisa (+). Cinezela le nto kwaye uya kuthunyelwa kwangoko kwikhamera yeselfowuni ukuze uthathe isithombe okanye ividiyo entsha.
Ukuthatha ifoto, cofa ivalaythi okanye iqhosha elimhlophe ezantsi kwesikrini, kanye embindini. Ukuba ufuna ukurekhoda ividiyo, cinezela kwaye ubambe iqhosha elifanayo esele likhankanyiwe, de ube uwubhalile umsebenzi owenzayo.
Kuyenzeka ukuba ukhethe ifayile ngokuthe ngqo kwigalari yakho ngale ndlela inye, kodwa ngokucinezela i-icon ngasekhohlo kweshutter.
Ude ufumane iziphumo ezinqwenelekayo kwaye unefoto okanye ividiyo ofuna ukuyipapasha, faka iqhosha kuzo zombini izitikha kunye nee-emoticon kunye nendawo.
Eli qhosha liya kumelwa yi icon ngaphezulu okanye ngaphantsi kwesikwere kunye nobuso obonwabileyo. Ngaphakathi kuyo, ukongeza koku kungasentla, uya kufumana ukhetho "@mention".
Ukusuka apha unako ithegi kumntu omthandayo, ubeka kuphela uphawu "@" elandelwa ligama lomsebenzisi okanye igama leakhawunti oyifunayo (kwimeko yentengiso).
Xa ubhala umsebenzisi omfunayo, ukhetho onokulufumana phakathi kwabalandeli bakho olunolo lwazi luya kuboniswa. Khetha iakhawunti efanelekileyo.
Cofa okanye ucofe indawo engaphandle kwekhibhodi ukufihla ikhibhodi. Emva kwexesha unokukhetha ukhetho "Yongeza umxholo kwibali lakho", ukuze ngale ndlela into oyenzileyo ngaphambili, ibonakaliswe ebalini.
Nje ukuba wenze yonke into ebonisiweyo, uya kube umakile umsebenzisi we-Instagram kwelinye lamabali akho kwaye wabelane ngomxholo opapashiweyo nabo ngendlela ethe ngqo.
Ingcezu yokuqala yolwazi ekufuneka uyazi kukuba umsebenzisi omaka kwibali lakho, ukuba nje ungomnye wabalandeli bakho, uyakufumana kwangoko isaziso esibonisa into oyenzileyo kubo.
Kwimeko apho ufuna ithegi Kumntu ongakulandeliyo, lo mntu ngekhe akwazi ukujonga ibali lakho, kodwa i-Instagram iyakubathumela isicelo sokubavumela balibone ibali.
Kwelinye icala, emva kokumakisha umsebenzisi, akazukuba namandla okucima okanye ukucima, kuya kufuneka alinde ukupapashwa ukugqiba iiyure ezingama-24 kwinethiwekhi yoluntu, emva koko anyamalale umphelo.
Ibali alizukuboniswa kukondla okanye iprofayile yomntu ophawuliweyo, okanye kumabali abo, ngaphandle kokuba bathathe isigqibo sokwabelana ngendlela efanayo neyenze eyakho.
Kwakhona, ukuba umsebenzisi uyafuna ithegi Sikuthintele, ayizukuvela phakathi konxibelelwano kwabo unokongeza ilebhile efanelekileyo kwaye nasiphi na isaziso asiyi kusebenza; kuya kwenzeka into enye ukuba nguwe oye wayivimba.
Thega ngaphezulu komntu omnye
I-Tag ngaphezulu komntu omnye kwibali lakho le-Instagram yinyani. Ungalibali ukubeka u "@" ukuze ilebhile isebenze, ukuba akunjalo, le nkqubo ayizukusebenza.
Nabani na ojonga eyakho Instagram StoriesKananjalo, banokundwendwela iprofayile yakho kunye neyomsebenzisi omthegileyo ngokunqakraza kwithegi yokukhankanya le yokugqibela okanye kwigama lakho lomsebenzisi.
Ewe kunjalo, ukuze kwenzeke ngale ndlela, iprofayili yomntu ngamnye kufuneka ibe yeyasesidlangalaleni, kuba iyimfihlo, abantu abangayilandeliyo abayi kuba nayo.
Ngokufanayo, ukuba unomdla Indlela yokuba neeakhawunti ezimbini ze-Instagram kwi-Android o Indlela yokuba neeakhawunti ezimbini ze-Instagram kwiselfowuniSiyakumema ukuba uqhubeke ukhangela iwebhusayithi yethu kwaye ufumane olu lwazi.
Musa ukushiya ibhlog yethu ungakhange ulibone inqaku lethu Indlela yokubeka ii-emoticon kwi-Instagram kumanyathelo ambalwa?
1 Indlela yokumakisha umntu kwibali le-Instagram
1.1 Maka umntu kwibali le-instagram: Inyathelo ngenyathelo
2 Idatha ebalulekileyo
2.1 Thega ngaphezulu komntu omnye
Ungayivala njani i-Instagram kwiPC ngokuchanekileyo?